माधव नेपालको प्रश्नः संसद चल्न नदिने अनि त्यत्तिकै तलबभत्ता सोहोर्ने ? - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केपी ओलीका कारण संसद चल्न नसकेको र स्थानीय तहअघि नै संसदीय निर्वाचनको विकल्प नभएको बताएका हुन ।
सर्वोच्च अदालतले व्यवस्थापिक संसद पुनस्र्थापना गरेपनि एमालेले लगातार अवरोध गरेका कारण समस्या सिर्जना भएको नेपालको ठहर छ ।
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित कुराकानीमा नेता नेपालले एमालेका सांसदले तलबभत्ता सबै सोहोर्न खोज्ने र संसद पनि चल्न नदिने गरेको आरोप लगाए ।
बिहिबार बालुवाटारमा पछिल्लो परिस्थितिका बारेमा छलफल भएको नेपालले बताए । “केपी ओलीले यसै पनि पहिला दुई पटक संसद्को हत्या गरेकै हुन् । अहिले पनि संसद् चल्न दिँदैनन् । तलबभत्ता सबै सोहोर्न खोज्छन् र संसद् चलेन भन्छन् ।” नेपालले भनेका छन, “यतिबेला देश र जनताको समस्याबारे संसद्मा व्यापक छलफल गर्नुपर्ने हो । तर प्रतिगामी रबैया कायमै छ । ओलीको रबैया संसद्विरोधी, संविधानविरोधी, अग्रगमनविरोधी हो । उनलाई नै संसद् चाहिएको छैन भने यस्तो प्रमुख प्रतिपक्ष देशलाई घाँडो भयो । संसद् चल्न नदिने हो भने भंग गर्दिने र चुनावमा जाने हुन्छ । अरू उपाय नै छैन भन्ने भयो ।”
संसदीय निर्वाचन गर्नु व्यवहारिक कत्तिको छ भन्ने प्रश्नमा नेपालले प्रतिगमनलाई मलजल हुने काम केपीहरुले गरिरहेकोले यसको संसद चल्न नदिने अवस्थामा यसको विकल्प नभएको बताए । “संसद् चल्न नदिने भएपछि के गर्ने? अहिले ओलीले गर्दा संसद् घाँडो भयो । संसद् ल्याउने संसदीय व्यवस्था असफलसिद्ध भयो भनेर प्रतिगामीलाई मद्दत पुग्ने काम ओलीहरूले गरेका छन् ।”
निर्वाचनका लागि संवैधानिक र कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएका कारण समस्या देखिएको उनको तर्क छ । “पहिला पनि स्थानीय तहको निर्वाचन तीनवटा मितिमा भएको थियो– वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते । संविधानमा गाउँसभारनगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्ने लेखेको छ ।” उनले भने, “तर कानुनमा अर्कै व्यवस्था भइदियो । यो मिलेको छैन । अर्कातर्फ प्रतिनिधिसभा चल्नै सकेन भने किन चुनावमा नजाने ? एकैचोटि चुनाव गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।”
संसद खुलाउन धेरै प्रयास भएपनि केपी ओलीले अटेर गरेको उनले बताए । “प्रधानमन्त्री देउवाजी बालकोट (ओली निवास) मै जानुभयो । त्यति गर्दा पनि टेर्दैनन् भने ओलीलाई कसले सम्झाउने ? अब जनतामा जान दिनुपर्छ, अरू केही उपाय छैन । दण्ड दिएर प्रतिपक्षमा झार्नुपर्छ, त्यसपछि बल्ल तह लाग्छन् ।”